Mareykanka oo laga codsaday inay soo bandhigaan qaabkii uu u dhacay dilka marxuum Cabdi Mahad – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Mareykanka oo laga codsaday inay soo bandhigaan qaabkii uu u dhacay dilka marxuum Cabdi Mahad
Guddoomiyaha majmaca muslimiinta Kenya, Ciise Axmed ayaa ugu baaqay safaaradda Mareykanka inay baahiyaan muuqaalada ay duubeen kaamerooyinka qarsoon ee CCTV ee ku rakiban safaaraddaas, si loo ogaado xaqiiqda qaabkii ay askarta Kenya khamiistii lasoo dhaafay u dileen marxuumka la oran jiray Cabdi Mahad Ibraahim.
Marxuumka la dilay oo 24-jir ah ayay ku eedeeyeen saraakiisha ciidanka Kenya iyo ilaaladda safaaradda Mareykanka inuu dhaawacay sarkaal ka tirsan booliska Kenya, kaasi oo ilaalo ka haayay safaaradda Mareykanka oo ku taala xaafadda Gigiri ee magaalada Nairobi.
War-saxaafadeed uusoo saaray guddoomiyaha majmaca muslimiinta Kernya Ciise Axmed waxa uu ku sheegay inay jiraan caddaymo la heli karo oo ay ku jiraan qoraalo ay qoyska marxuumka soo saareen iyo sawiradda goobta lagu dilay marxumka, kuwaasi oo muujinaya inuu sarkaalka aad ugu deg-degay dilka marxumka.
Waxa uu guddoomiyaha ka codsaday safaaradda Mareykanka inay baahiyaan muuqaalladda CCTV ee falka lagu dilay marxuumka, taasi oo gacan ka geysanayso faah-faahinta waxa dhacay ka hor dilka marxuumka.
“Hadii aan arrimahaasi la sameynin, waxaa aad u adkaan doonto in la dhameeyo kiiskaasi, waxaana suurto-gal ah in la qarinaayo qaabka dilkaasi u dhacay” Sidaas waxaa yiri guddoomiyaha majmaca muslimiinta Kenya, Ciise Axmed
Sidoo kale, guddoomiye Ciise ayaa ugu baaqay dowladaha Kenya iyo Mareykanka in la dedjiyo sidii baaritaan madax-banaan loogu sameyn lahaa shilkaasi, lana baahiyo natiijadda baaritaankaasi.
Dhinaca kale, safiirka Mareykanka u jooga Kenya, Robert Godec ayaa beeniyey in la qarinaayo xaqiiqda falkii lagu dilay marxum Cabdi Mahad Ibraahim, wuxuuna xusay inay socdaan baaritaanka kiiskaasi, waa sida uu hadalka u yiri.
Ciidanka booliska Kenya ayaa horey u sheegay inuu marxumka fiidnimadii khamiistii ahayd ee lasoo dhaafay uu tooreey ku dhaawacay sarkaal ilaalo ka ahaa safaaradda Mareykanka, ka hor inta uusan sarkaalkaasi toogasho ku dilin marxuumka.
Si kastaba ha ahaatee, warbaahinadda caalamka, gaar ahaan kuwa Mareykanka iyo Kenya iyo warbaahinadda bulshadda ayaa lagu soo bandhigay muuqaalka meydka marxumka oo ay dul taagan yihiin saraakiil Kenyan iyo kuwo ka tirsan FBI-da Mareykanka.